राज्यलाई करोडौँको भार पर्ने निर्णय सच्याउनुपर्छ - Naya Patrika
राज्यलाई करोडौँको भार पर्ने निर्णय सच्याउनुपर्छ
दामोदर रेग्मी, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
१) १० करोडको पक्की सरकारी भवन भत्काउन लाग्नुभएछ । त्यति महँगो सरकारी भवन भत्काउँदा राष्ट्रलाई आर्थिक नोक्सानी हुँदैन ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालय भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको सबैलाई थाहै छ । यो संवेदनशील र संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको निकाय हो । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा करोडौँ मूल्यका राम्रा भवन भत्काउने निर्णय भएका छन् भने त्यस्ता निर्णयलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । कार्यालयको पक्की भवन भत्काउँदैमा महालेखाले तुरुन्तै नयाँ भवन पाइहाल्ने पनि होइन । फेरि अझै ४० वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने पक्की भवन छ भने त्यसलाई भत्काउनु कुनै हालतमा उचित हुँदैन । अरू वैकल्पिक स्थान पहिचान गरी तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । सम्बन्धित निकाय पनि वैकल्पिक उपाय पहिचान गर्नतिर लाग्नुपर्छ । राज्यको करोडौँको सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।
२) किन यस्ता अदूरदर्शी र राज्यलाई हानि हुने निर्णय गरिन्छन् ?
आवश्यकतालाई हेरेर यस्ता निर्णय कहिलेकाहीँ हुन सक्छन् तर सच्याउनै नसकिने भने होइन । त्यतिखेर पनि भवन बनाउने जिम्मेवारी पाएको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयको नेतृत्वले यसबारे पूर्वआवश्यकता पहिचान गरी अन्य विकल्प खोज्न सक्नुपथ्र्यो । खर्च पनि कम गराउने र महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि बन्ने गरी विकल्प तथा उपायको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरेको देखिएन । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । दुवै पक्षले यस खालका निर्णय देशकै लागि सच्याउन सक्छन् । सच्याएर अघि बढेमा सबैलाई राम्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
३) अब यो निर्णय सच्चिन सक्छ त ?
यो निर्णय सच्चिन नसक्ने भन्ने प्रश्नै छैन । तर, यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका अधिकारी एकै ठाउँमा बसेर छिटोभन्दा छिटो उपयुक्त निकास पहिचान गर्नुपर्छ । उनीहरू दुवै मिलेर राज्यलाई कमभन्दा कम क्षति हुने र महालेखा परीक्षकको कार्यालय बनाउने गरी नयाँ खाले प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । उनीहरूले राज्यलाई क्षति कम हुने र भइरहेको भवनसमेत बचाउने गरी प्रस्ताव तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याउने हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विगतको निर्णय सच्याएर नयाँ प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरी स्वीकृत गराउने भूमिकामा रहन्छ । वास्तवमा १० करोडको पक्की भवन भत्काउने भन्ने समाचार जसरी आएको छ, यसलाई हामीले पनि निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ । किनकि राज्यको एक निकायको संरचना बनाउँदा अर्को निकायको संरचना ध्वस्त बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता सर्वोपरि नै रहेकाले पनि यस्ता निर्णय अविलम्ब सच्चिनुपर्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि आवश्यक पहल गर्नेछ ।